ဂရိတ်ဗြိတိန်နှင့် မြောက်အိုင်ယာလန် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
နိုင်ငံတော် သီချင်း: “ဘုရင်မကို ဘုရားသခင် ကယ်မတော်မူပါ”
၂၄၃ ၆၁၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၉၄ ၀၆၀ ဧကစတုရန်းမိုင်)
ဂရိတ်ဗြိတိန် နှင့် မြောက်အိုင်ယာလန် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ကို အများစုက ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း (ယူကေ) သို့မဟုတ် ဗြိတိန် ဟု သိကြသည့်နိုင်ငံမှာ  ဥရောပရှိ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဥရောပ ကုန်းမကြီး၏ အနောက်မြောက် ကမ်းရိုးတန်း အလွန်တွင် တည်ရှိသည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ၊ ဝေလနိုင်ငံ၊ စကော့တလန်နိုင်ငံ နှင့် မြောက်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတို့ ပါဝင်သည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် ဂရိတ်ဗြိတိန်ကျွန်း၊ အိုင်ယာလန်ကျွန်း၏ အရှေ့မြောက်ပိုင်း နှင့် ဗြိတိသျှကျွန်းစုရှိ ကျွန်းငယ် အများအပြား ပါဝင်သည်။ မြောက်အိုင်ယာလန်သည် အိုင်ယာလန်သမ္မတနိုင်ငံနှင့် ကုန်းမြေ နယ်နိမိတ် ထိစပ်နေသည်မှ အပ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအား အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာ၊ မြောက်ပင်လယ်၊ အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြား၊ ဆဲလ်တစ်ပင်လယ် နှင့် အိုင်းရစ်ရှ် ပင်လယ်တို့က ဝန်းရံထားသည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏ စုစုပေါင်း ဧရိယာမှာ ၉၃,၆၂၈ စတုရန်းမိုင် (၂၄၂,၅၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် ခန့်မှန်းလူဦးရေမှာ ၆၇သန်း ဖြစ်သည်။ 
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသည် တစ်ပြည်ထောင် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနှင့် စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ် ကျင့်သုံးသော နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။  ဘုရင်မ ဖြစ်သော ဒုတိယ အယ်လီဇဘက် သည် ၁၉၅၂ ခုနှစ်မှ စတင် အုပ်စိုးခဲ့သည်။ မြို့တော်နှင့် အကြီးဆုံးမြို့မှာ လန်ဒန်မြို့ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့မြို့တော်တစ်ခုနှင့် ငွေကြေးဗဟိုဌာန တစ်ခုဖြစ်ကာ မက်ထရိုပိုလစ်တန်ဒေသ၏ လူဦးရေမှာ ၁၄ သန်းကျော် ရှိသည်။ အခြားသော အဓိကမြို့များမှာ ဘာမင်ဂမ်မြို့ ၊ မန်ချက်စတာမြို့၊ ဂလက်စဂိုမြို့ ၊ လစ်ဗာပူးမြို့ နှင့် လိဒ်မြို့ တို့ ဖြစ်ကြသည်။  စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ ဝေလနိုင်ငံ နှင့် မြောက်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတို့တွင် သီးခြားအစိုးရများ ရှိကြပြီး ကွဲပြားသော အာဏာများ ပိုင်ဆိုင် ကြသည်။ 
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသည် နှစ်ရာပေါင်းများစွာအတွင်း ပါဝင်သောနိုင်ငံများကို ထည့်သွင်းခြင်း၊ ပြည်ထောင်စု အဖြစ် ပေါင်းစပ်ခြင်း နှင့် ခွဲထုတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၁၇၀၇ တွင် အင်္ဂလန်ဘုရင့်နိုင်ငံတော် ( ၎င်းတွင် ၁၅၄၂ ခုနှစ်တွင် စာရင်းသွင်း ထည့်သွင်းခဲ့သော ဝေလနိုင်ငံ ပါဝင်သည်) နှင့် စကော့တလန် ဘုရင့်နိုင်ငံတော်တို့ ချုပ်ဆိုခဲ့သော ပြည်ထောင်စု စာချုပ်အရ ဂရိတ်ဗြိတိန် ဘုရင့်နိုင်ငံတော် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ၁၈၀၁ ခုနှစ်တွင် အိုင်ယာလန် ဘုရင့်နိုင်ငံတော် နှင့် ပြည်ထောင်စု အဖြစ် ပေါင်းစည်း၍ ဂရိတ်ဗြိတိန် နှင့် အိုင်ယာလန် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၂၂ ခုနှစ်တွင် အိုင်ယာလန်၏ အစိတ်အပိုင်းတော်တော်များများမှာ ယူကေမှ ခွဲထွက်သွားခဲ့သဖြင့် လက်ရှိရှိနေသော ဂရိတ်ဗြိတိန် နှင့် မြောက်အိုင်ယာလန် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း သာကျန်ရှိပြီး ထိုအမည်ကို ၁၉၂၇ ခုနှစ်တွင် တရားဝင် ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့သည်။
အနီးအနားရှိ မန်းကျွန်း၊ ဂန်းဇီး နှင့် ဂျာစီ တို့မှာ ယူကေ၏ အစိတ်အပိုင်း မဟုတ်ဘဲ ဗြိတိသျှအစိုးရ၏ ဘုရင့်အစောင့်အရှောက်ခံနယ်မြေ များသာ ဖြစ်ကြပြီး ဗြိတိသျှအစိုးရမှ ကာကွယ်ရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ ကိုယ်စားပြုမှုများကို တာဝန်ယူထားသည်။ ထို့ပြင် ဗြိတိသျှတို့၏ ရေမြေခြား ပိုင်နက် ၁၄ ခု ရှိပြီး  ၎င်းမှာ ဗြိတိသျှအင်ပိုင်ယာ၏ နောက်ဆုံးကျန်ရစ်သော အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်ပြီး ဗြိတိသျှ အင်ပါယာမှာ ၁၉၂၀ ခုနှစ်များအတွင်း အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့စဉ်က ကမ္ဘာ့မြေထု၏ ၄ ပုံ ၁ပုံခန့် နှင့် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံခန့်ကို လွှမ်းခြုံ အုပ်စိုးထားနိုင်ခဲ့ကာ သမိုင်းတွင် အကြီးကျယ်ဆုံး အင်ပိုင်ယာ တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှတို့၏ လွှမ်းမိုးမှုအား ၎င်းတို့ကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့ဖူးသော နိုင်ငံများ၏ ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ဥပဒေနှင့် နိုင်ငံရေးစနစ်တို့တွင် လေ့လော တွေ့ရှိနိုင်သည်။ 
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသည် အကြမ်းမျဉ်း စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန် အရ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆဌမမြောက် စီးပွားရေးအရ အကြီးမားဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းအား ကွာခြားမှုနှုန်း (PPP) အရ အဌမမြောက် အကြီးဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဝင်ငွေ မြင့်မားသောနိုင်ငံဖြစ်ပြီး အလွန်မြင့်မားသော လူထုဖွံ့ဖြိုးမှု ညွှန်းကိန်း ရှိကာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဆင့် ၁၃ ရှိသည်။ နိုင်ငံတကာအဆင့်သတ်မှတ်မှုများအရ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ လူ့သက်တမ်း နှင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့တွင်လည်း မြင့်မားသော အဆင့် ရရှိသည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာ့အရေးများတွင် အင်အားကြီးနိုင်ငံ အဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်လျှက် ရှိသည်။ ယူကေသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမဆုံးသော စက်မှုနိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၉ ရာစုနှစ် ၂၀ ရာစု အစောပိုင်းများတွင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဩဇာအာဏာ အရှိဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်လည်း ယူကေသည် ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံများတွင် ပါဝင်ဆဲဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာတွင် စီးပွားရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စစ်ရေး၊ သိပ္ပံပညာ၊ နည်းပညာနှင့် နိုင်ငံရေး အရ လွှမ်းမိုးမှု ရှိသည်။  ၎င်းသည် နျူးကလီးယားလက်နက် ပိုင်ဆိုင်သော နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် စစ်ရေးစရိတ် စတုတ္ထမြောက် သုံးစွဲမှု အများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ယူကေသည် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ၁၉၄၆ ခု ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကတည်းကပင် ဖြစ်သည်။
↑ Great Britain | island, Europe။
↑ United Kingdom Permanent Committee on Geographical Names (May 2017)။ Toponymic guidelines for the United Kingdom။ “usually shortened to United Kingdom ... The abbreviation is UK or U.K.”
↑ United Kingdom။
↑ Countries withinacountry။ Prime Minister's Office (10 January 2003)။
↑ Definition of Great Britain in English။ Oxford University Press။ “Great Britain is the name for the island that comprises England, Scotland and Wales, although the term is also used loosely to refer to the United Kingdom.”
↑ Office for National Statistics။
↑ "United Kingdom" CIA The World Factbook. Retrieved 17 July 2013
↑ "Queen takes over longest reign mantle after Thailand's King Bhumibol dies"၊ AOL (UK)၊ 13 October 2016။
↑ Devolution of powers to Scotland, Wales and Northern Ireland။ United Kingdom Government။ “Inasimilar way to how the government is formed from members from the two Houses of Parliament, members of the devolved legislatures nominate ministers from among themselves to comprise executives, known as the devolved administrations...”
↑ Country Overviews: United Kingdom။ Transport Research Knowledge Centre။
↑ Key facts about the United Kingdom။ Directgov။ “The full title of this country is 'the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland'. Great Britain is made up of England, Scotland and Wales. The United Kingdom (UK) is made up of England, Scotland, Wales and Northern Ireland. 'Britain' is used informally, usually meaning the United Kingdom.
The Channel Islands and the Isle of Man are not part of the UK.”
↑ Supporting the Overseas Territories။ Foreign and Commonwealth Office။
↑ Julian Go (2007)။ "A Globalizing Constitutionalism?, Views from the Postcolony, 1945–2000"။ in Arjomand၊ Saïd Amir (ed.)။ Constitutionalism and political reconstruction။ Brill။ pp. 92–94။ ISBN 978-90-04-15174-1။
↑ World Population Prospects – The 2006 Revision။ UN။
↑ Professor Arne Björnberg, Ph.D (29 January 2018)။ Euro Health Consumer Index 2017။ Health Consumer Powerhouse။ 26 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mathias, P. (2001)။ The First Industrial Nation: the Economic History of Britain, 1700–1914။ London: Routledge။ ISBN 978-0-415-26672-7။
↑ Ferguson၊ Niall (2004)။ Empire: The rise and demise of the British world order and the lessons for global power။ New York: Basic Books။ ISBN 978-0-465-02328-8။
↑ T.V. Paul; James J. Wirtz; Michel Fortmann (2005)။ "Great+power" Balance of Power။ State University of New York Press။ pp. 59, 282။ ISBN 978-0-7914-6401-4။ Accordingly, the great powers after the Cold War are Britain, China, France, Germany, Japan, Russia and the United States p. 59
↑ McCourt၊ David (2014)။ Britain and World Power Since 1945: ConstructingaNation's Role in International Politics။ United States: University of Michigan Press။ ISBN 978-0-472-07221-7။
↑ "IISS Military Balance 2021" (January 2021). The Military Balance 121 (1): 23–29. doi:10.1080/04597222.2021.1868791.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ&oldid=749705" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ ဇူလိုင် ၂၀၂၂၊ ၀၄:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။